ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6your Cell Phone ကို Down ထားရန်အကြောင်းပြချက်
အားဖြင့် Erica Loop
သင်သည်မြို့၌ hippest နေရာအသစ်တစ်ဦး candlelit ညစာစားနေစဉ်အတွင်းသင့်အိပ်မက်တွေမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှအနှံ့ထိုင်နေသောင်. သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှစာသားများနှင့်အတူတက်မှုတ်စတင်သည်သည်အထိအရာအားလုံးတော်ဝင်ရင်ခုန်စရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်လေဘွေသည်, ညီမနှင့်ပင် mom, - အားလုံးကယ့်သို့မဟုတ်ဤသည်လျှင်င်ဘယ်လိုတောင်းဆိုနေတာသင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် "တည်း။ ": ငြိမ်ဝပ်စွာနေထို ringer, ကွာဖုန်းကိုကိုတင်နှင့်သင့်ရက်စွဲကျော်ဒါမှမဟုတ်သင်တိုင်းအတွက်လာမယ့်ရဲ့ message တိုင်းဖြေဆိုနိုင်သည်အထိလျစ်လျူရှု. သင်တို့ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာများကိုသာသင်နေ့စွဲကြီးကိုဖျက်ဆီးမအန္တရာယ်ကို run လိုက်တာ, ဒါပေမယ့်လည်းအခု-အငြိုးထားသောသူနှင့်အတူအနာဂတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာ.
အဘယ်ကြောင့်သင်ရက်စွဲတစ်ခုအတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းချသင့်တယ်, နှင့်မည်သို့အနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖွင့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားနိုင်? မဆိုင်ပါဘူးချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေး Ender သည်အဘယ်ကြောင့်ခြောက်ခုအကြောင်းပြချက်မှာကြည့်လိုက်ပါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်တို့ပတ်လည်သင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအပြည့်ဖြည်မေတ္တာကိုဘဝလှည့်ရန်ပြုနိုင်သည်.
သင်သည်သူလုံး​​ဝအရေးမကြီးင်ကဲ့သို့သူ့ကိုခံစားအောင်င်. ထိုကဲ့သို့သောသင်သူမ၏အီးမေးလ်များကိုမပြန်လျှင်ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တဦးဦးအားဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားန်သို့မဟုတ်သင့်ဘော့စ်ပစ်ခတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်တဲ့အတိုင်းဆိုးရွားအရေးပေါ်ရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့ရက်စွဲကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင့်ရဲ့အာရုံလ​​ွှဲရန်အနည်းငယ်သာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. အဲဒီအစားအစားတစ်ခုလုံးကိုညဦးယံ၌အဘို့သင့်နေ့စွဲရဲ့မျက်နှာကို၏မျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်၏, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပယ်ရှားခြင်းနှင့်သူ့ကိုသင်၏အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပေး.
သူမသည်ခင်ဗျားမိန်းမထဲသို့မဖြောင့်ထင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်. သင်တကယ်ကိုသည်နောက်တဖန်စကားပြောမဟုတ်ဘဲဘယ်တော့မှမယ့်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူနေ့စွဲပေါ်မှာဆိုရင်ကြောင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. သင်ဘာလုပ်မလဲ? သင့်ရဲ့အဖြေကိုတစ်နေရာရာကို "သူ့ကိုမအာရုံစိုက်" အမျိုးအစားအနီးကျလျှင် - ကိုသင်တို့အားတစ်ဦးမဆိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းအခါသင်လုပ်နေတာအတိအကျဘာကိုဖွင်. သင်အမှန်တကယ်သင့်ရက်စွဲ Uber-အံ့သြဖွယ်သောအသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမုံစာပို့ပါတယ်တောင်မှ, သူသည်သင့်ကိုသူမ၏အတွက်သုညစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်သည့်အရိပ်အယောင်အဖြစ်သင့်လုပ်ရပ်တွေကယူနိုင်ပါသည်.
သင်သည်မကောင်းတဲ့ကြည့်ရှု. သင်၏အမိသည်ကိုယ်တော်၏ဆင်းရဲသားအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ပြောမယ်လို့? သင်ကမိသားစုညစာမှာပါပဲဟန်ဆောင်လိုက်ဖို့, နှင့်သင့်လျော်သောစားပွဲပေါ်မှာရှေ့တွင်စဉ်းစား. သင်အတိအကျအလှမယ်ထုံးစံမဟုတ်ပါဘူးရင်တောင် 100 ထိုအချိန်ကာလ၏ရာခိုင်နှုန်း, ဤသူသည်သင်တို့ကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်း To-do တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
, Conversation တစ်ဦးနှစ်ဦးလမ်းဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ရက်စွဲများသင်နှင့်သင့်အလားအလာအသစ်မိတ်ဖက်ပဲအချင်းချင်းသိရန်နေကြပါတယ်အချိန်ပေး. အဆက်မပြတ်သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ glancing, သင်တို့ကိုရှေ့တော်၌လက်ျာဖြစ်ပျက်သင့်ကြောင်းတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုရန်ကြွလာသောအခါအီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများစာပို့ဟာအဓိကလမ်းပိတ်ထားတက်ကိုထည့်လေ့မရှိ. ဒါဟာသူ့ရဲ့ကလေးင်တူသူသည်မိမိအ beagle ဆက်ဆံသောကြောင့်သင်ရက်စွဲ "ဒါကြောင့်ချစ်စရာ" ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ BFF ပြောနေတာတ​​ကယ်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်သူ၏မေတ္တာတော်အကြောင်းသူ့ကိုစကားပြောနေတာထက် သာ. ကောင်း၏လျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ.
သင်ကသိပ်သဘောကောင်းမပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်အောင်င်. ချိန်းတွေ့ရေကူးကန်ဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ရောက်ရှိ, အခြားတပါးသောငါးတို့သည်သင့်ရာအရပ်ကိုယူအမြဲရှိနေပါတယ်. ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဆင်းရဲသောရိုက်ချက် Making သင်မည်သူနှင့်သူမနောက်တဖန်သင်တို့နှင့်အတူထွက်သွားမည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့အလားအလာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အကြံအစည်ဆေးရောင်ခြယ်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်. သူသည်သင့်ကိုဖြုန်းကြည့်ပြီးနောက်ဒုတိယရက်စွဲဖို့ "ဟုတ်ကဲ့" ဟုပြောသွား 30 သင်၏အထဲက 45 မိနစ်ညစာစာတိုပို့? ဒါဟာဖွယ်ရှိမယ်.
Connections အကလူတွေထားကြပါတယ်, မဆိုဘဲနည်းပညာ. သင်အွန်လိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးစာသားကနေတဆင့် "စကားပြော" ကြပေမဲ့, စစ်မှန်သောမေတ္တာကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့သင်အမှန်တကယ်လူ့-To-လူ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုလိုအပ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကောက်နေလည်းအလားတူလုပ်သင့်ရက်စွဲအခမဲ့နန်းစံပေးသည်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲစဉ်အတွင်းအခြားလူများထံသို့ Talking အချင်းချင်း connection တစ်ခုအောင်မှသင်တို့ကိုလွဲဖယ်သွား.